Nkɔmhyɛ a etia Babilon (1-64)
Mediafo bedi Babilon so nkonim prɛko pɛ (8-12)
Ɔtow nhoma no too Eufrate mu (59-64)
51 Nea Yehowa aka ni: “Hwɛ, merema mframa a ɛsɛe adeAbɔ Babilon+ ne wɔn a wɔtete Leb-Kamai* no. 2 Mɛsoma wɔn a wohuw hwiit so akɔ Babilon,Na wobehuw no ama n’asaase ada mpan.Na wɔbɛba no so wɔ afã nyinaa, amanehunu da no.+ 3 Nea okuntun agyan mu* no, mma onnkuntun mu bio. Na mma obiara nnsɔre mmfa dade ataade nnhyɛ. Munnhu ne mmerante mmɔbɔ.+ Monsɛe n’asraafo nyinaa. 4 Na wobekunkum wɔn agu Kaldeafo asaase so;Wɔn a wɔde ade awowɔ wɔn no begu ne mmɔnten so.+ 5 Asafo Yehowa, Israel ne Yuda Nyankopɔn no nnyaw wɔn hɔ.*+ Nanso bɔne ahyɛ wɔn asaase* no so ma wɔ Israel Kronkronni no ani so. 6 Munguan mfi Babilon,Na munguan mpere mo nkwa.*+ Monhwɛ na ne bɔne nti, moanwuwu. Efisɛ bere a Yehowa de betua bɔne so ka aso. Ɔretua no ka wɔ nea wayɛ ho.+ 7 Babilon ayɛ sika kɔkɔɔ kuruwa wɔ Yehowa nsam;Wama asaase nyinaa abobow. Amanaman no anom ne nsã no.+Ɛno nti na amanaman no abobɔ adam no.+ 8 Babilon ahwe ase mpofirim, na wabubu.+ Ne nti, munsu nteɛteɛm!+ Ne yaw no nti, mompɛ balsam ngo mma no;ebia ne ho bɛtɔ no.” 9 “Yɛyɛɛ biara sɛ yɛbɛsa Babilon yare, nanso ne ho antɔ no. Munnyaw no hɔ, na momma yɛnkɔ; obiara nkɔ n’asaase so.+ Efisɛ n’atemmu akodu soro;Akɔ ara akodu mununkum mu.+ 10 Yehowa abu atɛntrenee ama yɛn.+ Mommra, momma yɛnka Yehowa yɛn Nyankopɔn no adwuma ho asɛm wɔ Sion.”+ 11 “Monsew agyan ano;+ momfa akyɛm.* Yehowa akanyan Media ahemfo no honhom,+Efisɛ ɔpɛ sɛ ɔsɛe Babilon. Ɛyɛ Yehowa na ɔretua bɔne so ka; ɔretua bɔne so ka ama n’asɔrefi. 12 Momfa ahyɛnsode*+ nsi Babilon fasu so. Momma ɔwɛn no mu nyɛ den. Momma awɛmfo nnyinagyina hɔ. Mompɛ wɔn a wɔbɛkɔ akɔtetɛw. Efisɛ Yehowa afa adwene,Na nea wahyɛ bɔ sɛ ɔde bɛyɛ Babilonfo no, ɔbɛyɛ.”+ 13 “O ɔbea a wote nsu pii so,+A wowɔ agyapade pii,+W’awiei aba, na mfaso a wunya no to atwa.*+ 14 Asafo Yehowa aka ɔno ara ne ho* ntam sɛ,‘Mɛma mmarima ayɛ wo mu ma; wɔbɛdɔɔso te sɛ ntutummɛ,Na wo nti, wɔbɛbɔ ose.’+ 15 Ɔno na ɔde ne tumi yɛɛ asaase,Na ɔde ne nyansa maa asaase tim hɔ;+Ɔno na ɔde ne nhumu trɛw ɔsoro mu.+ 16 Sɛ ɔma ne nne so a,Nsu bobom wɔ soro,Na ɔma mununkum* fi asaase anoano foro kɔ soro. Ɔyɛ anyinam ka osu ho,*Na ɔde mframa fi n’adekora adan mu ba.+ 17 Nnipa nyinaa yɛ wɔn ade te sɛ nea wonni adwene ne nimdeɛ. Ɔtomfo biara ani bewu wɔ ne honi ho,+Efisɛ ne dade honi* no yɛ nnaadaa,Na honhom* biara nni wɔn mu.+ 18 Wɔyɛ adehunu,*+ biribi a nkurɔfo hwɛ serew. Sɛ wɔn akontaabu da ba a, wɔbɛsɛe. 19 Yakob Kyɛfa de, ɔnte sɛ eyinom,Efisɛ Ɔno na ɔyɛɛ nneɛma nyinaa,N’agyapade poma no mpo, ɔno na ɔyɛe.+ Asafo Yehowa ne ne din.”+ 20 “Woyɛ m’aporibaa a mede kɔ ɔko, m’akode,Efisɛ wo na mede wo bebubu amanaman. Wo na mede wo bɛsɛe ahenni ahorow. 21 Wo na mede wo bebubu ɔpɔnkɔ ne nea ɔte no so. Wo na mede wo bebubu ɔko teaseɛnam ne nea ɔte mu. 22 Wo na mede wo bebubu ɔbarima ne ɔbea. Wo na mede wo bebubu akwakoraa ne abarimaa. Wo na mede wo bebubu aberante ne ababaa. 23 Wo na mede wo bebubu oguanhwɛfo ne ne nguan. Wo na mede wo bebubu okuafo ne ne mmoa a ɔde wɔn funtum asaase. Wo na mede wo bebubu amradofo ne asoafo. 24 Na metua Babilon ne Kaldeafo nyinaa ka,Bɔne a wɔayɛ wɔ mo anim wɔ Sion no nyinaa nti,”+ Yehowa asɛm ni. 25 “O bepɔw a wosɛe ade, me ne wo anya,”+ Yehowa asɛm ni,“Wo a wosɛe asaase nyinaa;+ Mɛteɛ me nsa wɔ wo so, na mamunumunum wo afi abotan mu abɛhwe fam,Na mɛma woayɛ bepɔw a ahyew.” 26 “Nnipa remfa ɔbo a wɔde bɛto ntwea so ne ɔbo a wɔde bɛto fapem mfi wo mu,Efisɛ wobɛdan amamfo afebɔɔ,”+ Yehowa asɛm ni. 27 “Momma ahyɛnsode* so wɔ asaase no so.+ Mommɔ abɛn wɔ amanaman mu. Munyi* amanaman no mma wɔne no nkɔko. Momfrɛfrɛ Ararat+ ne Mini ne Askenas+ ahenni nkɔ no so. Mompɛ obi a ɔbɛboaboa dɔm ano akɔ no so. Momma apɔnkɔ mmra sɛ ntutummɛ manyamanya. 28 Munyi* amanaman no,Media ahemfo,+ n’amradofo ne n’asoafo nyinaa,Ne nsaase a wodi so nyinaa mma wɔne no nkɔko. 29 Na asaase bɛwosow na ahinhim,Efisɛ adwene a Yehowa afa wɔ Babilon ho no bɛba muAma Babilon asaase ayɛ biribi a ɛyɛ hu, na obiara rentena hɔ.+ 30 Babilon mmarima a wonim ko no agyae ko. Wɔtete wɔn abannennen mu. Wɔn ahoɔden asa.+ Wɔayɛ sɛ mmea.+ Wɔde ogya ato n’afi mu. Wɔabubu nea ɔde abrambram n’apon akyi no.+ 31 Ommirikatufo baako tu mmirika kohyia ommirikatufo foforo,Na ɔsomafo baako kohyia ɔsomafo foforo,Na wɔkɔbɔ Babilon hene amanneɛ sɛ nkurɔfo adi ne kurow no nyinaa so,+ 32 Na wɔafa baabi a wɔfa twa asu no nyinaa,+Na wɔde ogya ahyew akorow a wɔde mmɛw* ayɛ no,Na asraafo no abɔ hu.” 33 Na nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni: “Babilon babea te sɛ awiporowbea. Bere aso sɛ wotiatia no so tim fam. Ɛrenkyɛ koraa na ne twabere adu.” 34 “Babilon hene Nebukadnesar* amene me;+Wama m’adwene atu afra. Wama mayɛ sɛ ade a hwee nni mu. Wamene me te sɛ ɔwɔ kɛse bi;+Ɔde me nneɛma pa ahyɛ ne yafunu ma. Wahohoro me kɔ. 35 Nea ɔte Sion no ka sɛ, ‘Ayayade a wɔde yɛɛ me* no, ebi mmra Babilon so!’+ Na Yerusalem nso ka sɛ, ‘Me mogya mmra Kaldeafo so!’” 36 Enti nea Yehowa aka ni: “Hwɛ, medi w’asɛm ama wo,+Na metua no ka ama wo.+ Mɛma ɛpo a ɛda ne hɔ no ayow, na mama ne mmura ayoyow.+ 37 Babilon bɛdan abo asum hɔ,+Na ayɛ sakraman tenabea,+Na ɛbɛdan biribi a ɛyɛ hu ne biribi a nkurɔfo bɛtɛɛ wɔn anom ahwɛ,*Na obiara rentena hɔ.+ 38 Wɔn nyinaa bɛbobom sɛ agyata;* Wobepow te sɛ agyata mma.” 39 “Ɛda a wɔn akɔnnɔ bɛba no, mɛtow wɔn pon na mama wɔabobow,Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn ho bɛsɛpɛw wɔn.+Afei wɔbɛda afebɔɔ,Na wɔrensɔre bio,”+ Yehowa asɛm ni. 40 “Mede wɔn besian aba te sɛ nguan mma a wɔrekokum wɔn,Te sɛ adwennini ne mpɔnkye.” 41 “Hwɛ sɛnea wɔakyere Sesak,*+Hwɛ sɛnea wɔafa asaase nyinaa Ayeyi no!+ Hwɛ sɛnea Babilon adan biribi a ɛyɛ hu wɔ amanaman no mu! 42 Ɛpo atwiw afa Babilon so. N’asorɔkye bebrebe no akata no so. 43 Ne nkurow adan biribi a ɛyɛ hu, asaase a nsu nni so ne anwea pradadaa. Asaase a obiara rentena so, na onipa biara rentwam mfa hɔ.+ 44 Metu m’ani asi Bel so+ wɔ Babilon,Na nea wamene no, mɛma wafe aba.+ Amanaman remmom yuu nkɔ ne nkyɛn bio,Na Babilon fasu bedwiriw agu.+ 45 Me man, mumfi ne mu!+ Munguan mpere mo nkwa*+ mfi Yehowa abufuhyew mu!+ 46 Mommma mo koma nntu, na mommmɔ hu, amanneɛbɔ a mobɛte wɔ asaase no so nti. Afe baako, amanneɛbɔ no bɛba,Na afe a edi hɔ no, mobɛte amanneɛbɔ foforo,Ɛyɛ awudisɛm a ɛwɔ asaase no so ne sodifo a wasɔre atia sodifo foforo ho amanneɛbɔ. 47 Enti hwɛ! nna bi reba,Saa bere no, metu m’ani asi Babilon ahoni no so. N’asaase nyinaa anim begu ase,Na nkurɔfo a wobekunkum wɔn no bɛtotɔ wɔ ne mu.+ 48 Ɔsoro ne asaase ne nea ɛwom nyinaaBɛto Babilon ho ahurusi dwom,+Efisɛ asɛefo no befi atifi fam aba no so,”+ Yehowa asɛm ni. 49 “Ɛnyɛ Israelfo a wɔakunkum wɔn no nko ara na Babilon ma wɔtotɔe,+Na mmom asaase sofo a wɔakunkum wɔn no nyinaa nso totɔe wɔ Babilon. 50 Mo a moaguan afi sekan ano, monkɔ. Munnnyina hɔ!+ Mumfi akyirikyiri nkae Yehowa,Na monkae Yerusalem nso wɔ mo koma mu.”+ 51 “Wɔagu yɛn anim ase, efisɛ yɛate adapaatwa. Aniwu akata yɛn anim,Efisɛ ahɔho* aba Yehowa fi kronkronbea no so.”+ 52 “Enti hwɛ! nna bi reba,” Yehowa asɛm ni,“Saa bere no metu m’ani asi n’ahoni no so,Na wɔn a wɔapirapira no bɛpenepene* wɔ n’asaase nyinaa so.”+ 53 “Sɛ Babilon foro kɔ soro,+Na ɔma n’abantenten yɛ den sɛ dɛn mpo a,Me nkyɛn na n’asɛefo no befi aba,”+ Yehowa asɛm ni. 54 “Tie! Wɔte nteɛteɛm wɔ Babilon,+Ɔsɛe kɛse nnyigyei wɔ Kaldeafo asaase so,+ 55 Efisɛ Yehowa resɛe Babilon,N’ano denneennen no, ɔbɛma waka atom,Na wɔn asorɔkye bebu afa so te sɛ nsu pii. Wɔbɛte wɔn nne nnyigyei no. 56 Na ɔsɛefo no bɛba Babilon so;+Wɔbɛkyere ne mmarima a wonim ko no.+Wobebubu wɔn agyan mu pasaa,Efisɛ Yehowa yɛ Onyankopɔn a otua bɔne so ka.+ Nea ɛte biara, obetua ka.+ 57 Mɛma ne mpanyimfo ne n’anyansafo abobow,+N’amradofo ne n’asoafo ne ne mmarima a wonim ko no.Na wɔbɛda afebɔɔ,Na wɔrensɔre bio,”+ Ɔhene a ne din de asafo Yehowa no na waka. 58 Nea asafo Yehowa aka ni: “Babilon fasu trɛw, nanso wobedwiriw ne nyinaa agu,+N’apon yɛ atenten, nanso wɔde ogya bɛhyew. Aman no bɛbrɛ agu kwa;Amanaman no bɛbrɛ wɔn ho ayɛ adwuma, nanso ogya na ɛbɛhyew no.”+ 59 Akwankyerɛ yi na odiyifo Yeremia de maa Maseia ba Neria ba+ Seraia, bere a ɔne Yuda hene Sedekia kɔɔ Babilon, n’ahenni afe a ɛto so anan mu no. Seraia na na ɔhwɛ ɔhene nneɛma so.* 60 Yeremia kyerɛw mmusu a ɛbɛba Babilon so no nyinaa wɔ nhoma baako mu, nsɛm a ɔkyerɛw tiaa Babilon yi nyinaa. 61 Bio nso, Yeremia ka kyerɛɛ Seraia sɛ: “Sɛ wudu Babilon, na wuhu kurow no a, kenkan nsɛm yi nyinaa den. 62 Na ka sɛ, ‘O Yehowa, wo na wokae sɛ kurow yi bɛsɛe, na obiara rentena mu, onipa ne aboa nyinaa. Na ɛbɛdan amamfo afebɔɔ.’+ 63 Na sɛ wokenkan nhoma yi wie a, fa kyekyere ɔbo na tow to Eufrate bun mu. 64 Afei ka sɛ, ‘Saa na Babilon bɛmem a ɛrensɔre bio da,+ mmusu a mede reba no so no nti; na wɔbɛbotow.’”+ Ɛha na Yeremia nsɛm no si.
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ din bi a wɔde frɛ Kaldea bere a wɔmpɛ sɛ obiara behu sɛ Kaldea ho asɛm na wɔreka.
^ Nt., “otiatia agyan so.”
^ Nt., “mmaa wɔnyɛɛ akunafo.”
^ Kyerɛ sɛ, Kaldeafo asaase.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “monhyɛ mo agyan kotoku ma.”
^ Anaa “frankaa.”
^ Nt., “wo mfasonya kuruwa no ayɛ ma.”
^ Anaa “ahuhude.”
^ Nt., “Munhyira.”
^ Nt., “wɔde yɛɛ me ne me honam.”
^ Anaa “besi apini.”
^ Anaa “ɔyɛ apiafohene.”